Mpanamboatra sy mpamatsy teher-kitay - Orinasa Kisary Teoret any Sina
Teeth Wooden, hazo voajanahary 100%, tsy mora miteraka bakteria, kilalao nono ho an'ny zazakely. Ny teoretis vita amin'ny hazo dia tsy vitan'ny hoe manampy ny zazakelinao hanamaivana ny fanaintainan'ny siligaoma, fa hanamora ny vava ny zanakao koa.
Manomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny zaza, ny tety dia fotoanan'ny tetezamita ilaina. Ankoatra ny teher silika malefaka, ny teiter hazo voajanahary koa dia kilalao teething tena tsara.
Manana tetera hazo amin'ny endriny isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny endrika biby mahafatifaty. toy ny bitro, bitro, elefanta, hedgehog, amboahaolo, unicorn… .. Misy koa peratra hazo misy endrika sy habe samihafa.
Azontsika atao ny mampiasa hazo teeter amin'ny vokatra vita tanana isan-karazany DIY, dia hamorona karazan-tady sy rojo kanto fatratra. Mandritra izany fotoana izany dia raisinay ihany koa ny teiter namboarina natao tany Chine.
Wooden Teether ho an'ny biby biby an-tsaha biby biby ...
tsara indrindra teether ny 4 volana , teething rojo ho an'ny zazavavy kely, silicone teething vakana , silicone zaza teether , voajanahary teething, silicone teether ,